I-Turkey ikhubekisa iSyria i-harbinger yaseYurophu: UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	10 Oktobha 2019	• 6 Comments
Kwakuyinto ehlekisayo indlela abezopolitiko baseDatshi abasabele ngayo izolo kuhlaselo lwaseTurkey kuMantla eSyria. Kwakusekumaphepha-ndaba ehlabathi ukuba iTurkey ityikitye isivumelwano kunye ne-US kwaye uTrump waye warhoxisa imikhosi yakhe ukuba ingene kuhlaselo lwaseTurkey. Le nto siyibiza ngokuba 'yi-mustard emva kokutya'. Emva koko phawula ilizwe elinjalo kwangaphambili kunokuba ulile xa sele kuhambile. Kungacaca ngoku ukuba abapolitiki bayasazi isibhalo esichaziweyo ngaphambili, kwaye, ubukhulu becala, kukubekwa "kwinqanaba".Owu, sinomsindo kangakananiDlala. I-America irhoxa kwi-Kurdish YPG Fighters ezazisetyenziselwa ngaphambili ukulwa i-IS eyayisenziwa ngaphambili (eyayisakuba yi-ISIS). Ngaba kuvakala kuyinto engaqhelekanga kuwe, ukuba nditsho ukuba YADALWA? Emva koko kuya kufuneka ubone kuqala ngokubhala iscript.
Iskripthi esikhulu kukuba iTurkey kwakufuneka ikhule ngamandla. I-Turkey idinga indlela yamandla yento kwaye loo nto yindlela yokuhamba kweembaleki ukuya eYurophu. Ngokuqala imfazwe eSyria ngokusebenzisa imikhosi yokuloba eyakhelweyo, anincedi mzi mveliso kuphela, kodwa iTurkey yabamba itephu yegolide. Ukuba iTurkey yavula amasango abalekele eYurophu, oko kuya kudala isiphithiphithi eYurophu. Ukuze oko kufuneka kubekho uxinzelelo oluncinci kuloo mpompo, kanye njengenqaba enamanzi esetyenziselwa ukubeka uxinzelelo kwimibhobho. Yaqala ke imfazwe eSiriya. Imfazwe ebeka uxinzelelo kubunkokeli ngeembaleki ezininzi ezinkulu. Okwangoku, iinkonzo zemfihlo zamanye amazwe ezivela eNetherlands nakwamanye amazwe zazinceda ngokuhle ngokuthi zikwazi ukwenza "konke konke" ngokuchasene nabo bonke oogxa ababezimisele ukuya eSyria. Le yindlela oyakha ngayo imikhosi yommeli kunye nokugcina ukubonakala kwakho kwezopolitiko ngokusebenzisa iinkqubo zokuthetha nezopolitiko ezinomsindo kunye noJeroblejs Pauw kunye noMatthijs van Nieuwkerkjes onokuvala amehlo abantu kakhulu (ngokuchasene nomvuzo omkhulu wesifundo).
I-Turkey ithe okwangoku yakha ishishini lomkhosi elomeleleyo phantsi kwexesha le-AKP kunye ne-Erdogan, ekungekho mithombo yeendaba engakhange ihoye nakuphi na ingqalelo. Ngoku iyakwazi ukuvelisa i-frigates enkulu yaselwandle ngokwayo, ivelise iitanki, iidrone, ukulwa ihelikopta ngcono kune-Apache kwaye ke uluhlu olunokugqitywa. Ilizwe linomkhosi oxelela ngokuchasene nawo kwaye ukuba ubalulekile kwiintsuku ezimbalwa qengqeleka eYurophu. I-Turkey yenze into eyenziwe yiJamani kwi-30 yenkulungwane edluleyo, xa kungekho mntu wayenake ingqalelo. Inomkhosi wesibini omkhulu phakathi komanyano lwe-NATO (emva kwe-US); Olo manyano olungasasebenziyo, kuba i-EU inomsindo ngeTurkey kwaye umphathiswa uStefje Blok ufuna iTurkey ilungelo lokuvota ngaphakathi kwe-NATO kwaye i-US yayivele ixabana neTurkey kwaye ide yanyanzeliswa. Ezi zono zibange ukuba i -iraira yaseTurkey yehle kakhulu, kodwa ngokuchasene nento esicinga ukuba isiphumo, siyinto efihlakeleyo kakhulu kuqoqosho lwaseTurkey. Ayisixhasi nje kuphela abakhenkethi (kuba iiholide ezingabizi kakhulu), kodwa zilungile ngakumbi kumazwe angaphandle. Kuba iTurkey ivelisa izixhobo ezingaphezulu kokuba uyazi, ilunge kakhulu kumzi-mveliso wezomkhosi, ukuze wena njengelizwe ungatyala imali kuyo.
I-Turkey ke ngoko inokuvelisa phantse yonke into ngokwayo kwaye ibenayo i-5e fitness jet jet under development. I-Turkey ilungele ukuthathwa ixesha elide nokucwangciswa kwe-Europe nge-Blitz Krieg. Ukulungiselela loo nto, iluncedo xa sele kukho isiphithiphithi eYurophu kwaye iBrexit yayisetyenziselwe le nto, kodwa iya kunceda ukuba umaleko phakathi kwesobunxele uye ekunene wonyuselwe kwiindawo eziphakamileyo kakhulu (ubugrogrisi obudalwe ziinkonzo ngokwazo). I-wick kuphela kufuneka iphoswe kwi-keg yomgubo ngaphakathi kwemida ye-EU. Iimpawu ezimbalwa zemithombo yeendaba ezihlaselo yesehlo; iyakwenza imimangaliso. Ukuba iTurkey idibanisa ukucaphukisa eMantla eSyria kunye nokuvula kwetephu yokubalekela kwiYurophu (kuba i-EU ayifuni ukuhamba yonke indlela ngenkxaso ye-6 yezigidi zezigidi eyamkelweyo; kuba i-EU ibinengxaki yeminyaka ngokufikelela kweTurkey kwi-EU kwaye ngenxa yokuba i-EU ingafuni kuxhasa indawo ekhuselekileyo yokufumana iimbacu eMantla eSyria.), ke iimbaleki ezifanelekileyo ze-IS zibaleka ziye e-Yurophu emva koko unokuhambisa imfazwe yommeli kwimimandla yaseYurophu kwaye unengxaki, leyo iTurkey enokuthi emva koko isebenze njengomsindisi.
Ukuba uTrump ngoku ulahla i-Kurdish YPG yokulwa njengezitena, (ukuba ubona iscript) iyaqondakala. I-EU mhlawumbi iya kugxeka uTrump kwakhona, kodwa ngokuthe ngcembe siyayazi loo nto yokulwa kwezopolitiko.
Sisemva kobusuku bokuvuka koBukhosi base-Ottoman kwaye iTurkey inayo yonke impahla. Konke oko kuya ngokwe-master script, kodwa ndiya kukuchaza kwakhona kwincwadi yam entsha. Sele ndiyichaza rhoqo kwisiza, kodwa ngamanye amaxesha kuthatha ixesha ukuba ipeni iwele. I-Turkey ligunya lehlabathi elitsha kwaye i-US bubukhosi baseNtshona baseNtshona ekupheleni kwe-Latin. Ibhanti eyakhiwe ngononophelo 'ekunene' (kunye nokudityaniswa nokucinga okubucayi ngoompopu uTrump), iya kunyuswa ngokudubula uqoqosho lwaseMelika. Oku kuya kujongana noTrump kwaye i-odolo yezopolitiko yakudala iya kuphakanyiswa kwakhona. Kwangelo xesha, isimo sengqondo sokulwa nokudibana kwehlabathi kunye nokugxekwa kwe-ajenda yemozulu kuyajongwana nayo; kuba yonke inxulunyaniswe nophawu 'lokunene'. Imephu yendlela eya kurhulumente wehlabathi kufuneka ikwazi ukuphinda isasazwe ngokupheleleyo, ivumela uphawu 'lwasekunene' ukuba lunikwe amandla okugxeka intlekele yoqoqosho kunye noxinzelelo. Le yokugqibela yinto elindele iMelika neYurophu. Kwaye emva koko inkwenkwezi endala yaseRoma-ijeli iqala ukusebenza: "Ordo ab ChaoMsgstr ". Uqala ukudala isiphithiphithi kwaye emva koko ubuyisela i-odolo. Lo myalelo mtsha uza kuvela u-Erdogan eYurophu, leyo ibikusisikhumbuzo sam iminyaka. Thatha izifundo zaseTurkey.
Amagebengu aseKkurdish phantsi kwemibhozo ephuzi iFransi yathi i-Erdogan
I-2023 Unyaka owaseYurophu uhlangene noMbuso wase-Ottoman
Ukuhlasela kweTurkey yeSiriya: Ilungu le-NATO lilwa namavukeli axhaswe yilungu le-NATO
INGXELO yokulahlekelwa kwemhlaba eSiriya nase-Iraq yinto engaphambili yokuqhusa phambili kwiYurophu?
tags: hlaselwa, EU, eziziimbalasane, utsaliwe, iinkampu, caged, Kurdish, NATO, Noord, ehlaselayo, ESiriya, ngasemva, turkey, VS, I-YPG
10 Oktobha 2019 kwi-09: 17
16 Oktobha 2019 kwi-18: 43
16 Oktobha 2019 kwi-18: 44
Umgcini wezicwangciso unezicwangciso ...
16 Oktobha 2019 kwi-19: 21
Isicwangciso kudala samiselwa kwaye (njengoko bekuxelwe kwithuba elidlulileyo) kukho i-50 nukes ezintle kwisiseko se-Incirlic. Bavela e-US, kodwa njengelungu le-NATO, u-Erdogan yena uyazi kakuhle indlela yokuxhoma ezo zinto phantsi kwendiza kwaye unaso isitshixo kunye nocingo lwesiseko.
I-Turkey ngequbuliso iba ngamandla enyukliya! Eureka!
17 Oktobha 2019 kwi-20: 11
Ukunyanzelwa kokuqala kwanikezelwa ngabantu abasebenza kwi-luciferians, unokubona ukuba u-Erdogan uyayifeza indima yakhe njengehashe le-NATO le-Trojan. Yenza ngathi kukho ukungqubana kwangaphakathi kwaye kwangaxeshanye usasaze isandisi samehlo emehlweni kunye neengxelo eziphikisayo (jonga neBrexit). Siza kubona ukuba i-dominoes iza kuwa njani ..
Kwiminyaka emininzi ngoku ndiye ndagxila kwinani eliqwalaselweyo lokuhlalutya umxholo weSyria, ndigxininisa ukubaluleka kwelizwe kwii-elites zehlabathi njenge-kind okanye i-geopolitical detonator; I-domino yokuqala kumxokelelwane weedomino ezinokukhokelela kwimfazwe ebandakanya amandla ehlabathi. Ndiyakholelwa ukuba le mfazwe iya kuphuhlisa imimandla emininzi, ngokubaluleke kakhulu phambili kwezoqoqosho, kodwa inokujika ibe yimfazwe yokudubula ebandakanya abadlali abaninzi.
Njengoko besenditshilo kumanqaku angaphambili, imisitho yezejografi isetyenziswa ngokusekwa kwe-globalist njengephazamiso kunye nokugubungela ukudilizwa kwabo kuqoqosho. Bafuna i-scapegoats zokufakwa kwi-Bubble ye-Into yonke, implosion abayiyiqalise kwi-2018 ngemigaqo-nkqubo yokuqinisa i-liquidity ngoku ekhawulezayo kwingxaki yemali egcwele ngokupheleleyo. Ukuhlaselwa kweTurkey kweSyria kunokuba ngumcimbi ophazamisayo.
"Ukurhoxa" e-US ayisosirhoxiso, kuyimbambano yongquzulwano olukhulu olunceda i-cabalism ye-globalism.
17 Oktobha 2019 kwi-22: 01
Rifian, yonke intle kwaye intle kodwa ukuba umntu otyholwayo oqhelekileyo ucelwe ukuba adlale indima yakhe kwincwadi kaPike ye-kabbalah ke akukho kuxhathisa oko. I-Befehl i-immer ein befehl…
« Ukupheliswa Ukupheliswa liqela labaphembeleli abahlawulwayo
Umlawuli weMvukelo yokuGqibela uMargaret Klein Salamon: "Inqanaba elilandelayo kukuthatha inyani ukuba yinyani" »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.135.038